China Wireless Earbuds Bluetooth 5.0 Mahedhifoni,mu-Nzeve Earphone Kugadzira uye Fekitori |Roman
Kana uine chero mubvunzo, tapota taura nesu:(86-755)-84811973
Kambani Show/Factory Tour
R & D Simba
Clinet yedu / Partners
Low Latency TWS Earbud
Mvura isina mvura TWS Earbud
Munzeve TWS Earbud
Semi Munzeve TWS Earbud
Bata Kudzora TWS Earbud
TWS Ine LED chiratidzo
TWS Smart LED Display yekuchaja kesi
Mutambo TWS Earbud
MuMotokari Bluetooth Headset
Sport Leather Chokwadi Wireless Earbuds
Chokwadi Wireless Bluetooth IPX5 Sweat Uchapupu
TWS Bluetooth Earbud ine IPX5 isina mvura
Chokwadi Wireless Active Noise Kudzima Earbuds
Chokwadi Wireless Earbuds ane Hollow Metallic Kuchaja ...
Wireless Earbuds Bluetooth 5.0 Mahedhifoni, mu-Nzeve Nzeve...
AirPods ine Wireless Kuchaja Case
TWS LED chiratidzo & Simba bhatiri huwandu, Tou...
PU Leather Wireless Earbuds, Bluetooth Earbuds Bata...
Diki Wireless Earbuds 5.0 Mahedhifoni ane Wirele...
TWS Bluetooth Headphone ine LED magetsi kuratidza
TWS Mahedhifoni muEarbuds Headset
Bluetooth Headphones Neckband V5.0 Wireless Headset ...
Nzeve Imwe Bluetooth Mahedhifoni eHofisi / Workout / Dri...
Single-Sided Bluetooth Wireless Headset yeMobile D...
Bluetooth Earpiece Wireless Handsfree Headset ine 1...
Wireless Earbuds Bluetooth 5.0 Mahedhifoni, mu-Nzeve Nzeve
Nguva Yekutaura: 5H
Nguva Yakamira: 90H
Kuchaja bhokisi: 500 mAh
Headset bhatiri: 60 mAh
WT230U chipset uye Bluetooth 5.0 kuwana kukurumidza kutapurirana uye kuderera kushandiswa.
Ergonomic mu-nzeve kupfeka nemapeya matatu emhando dzakasiyana dzekepisi dzenzeve dzakagadzikana uye dzakagadzikana.
Tinya kaviri kubata bata, zvichiita kuti kushanda kwega kwega kuve nyore.
6mm tsika yuniti PEEK biological composite yakajeka uye ine simba ine yakaderera kukanganisa uye zvirinani kuburitsa ruzha kugona.
Yakangwara uye yakanakira: vhura chivharo uye ubatanidze: yekuchaja bhokisi ine horo switch yekudzora simba pa/kudzima basa.
Imwe-Nhanho Pairing uye Nyore Kubata Kudzora: TAGRY X08 bluetooth mahedhifoni anotora horo switch.Mushure mekutanga kubatana, idzi nhare dzisina waya dzinobatana nechishandiso chako kana wangovhura kesi yekuchaja, inokurumidza uye nyore.
Panguva yekushandisa, unogona kubata chero earbud kudzora foni, senge mimhanzi switch, vhoriyamu kugadzirisa, kufona, inzwi mubatsiri, etc. Hapana chikonzero chekugadzirisa kuburikidza nenharembozha dzako.
iyo 500mAh yekuchaja bhokisi inokwanisa kuchaja maearbud maviri kwenguva dzinenge 6 uye imwe earbud kwenguva dzinenge gumi nembiri, ichibvumira kuridza mimhanzi uye kufona kunowedzera kusimba.
Mirayiridzo iri nyore:
1. Kubatanidza: tora kunze nzeve dzekuruboshwe uye dzekurudyi kubva mubhokisi rekuchaja uye foni ichangoerekana yapinda mamiriro ekutsvuka uye bhuruu mwenje unopenya neimwe nzira.Foni ichatsvaga zita rekubatanidza.Dzvanya batanidza uye pachave nemagetsi ekukurumidza kurira.
2. Rwiyo rwapfuura:Ridza mimhanzi kwemasekonzi matatu nekubata mahedhifoni (L).
3. Rwiyo runotevera:Ridza mimhanzi kwemasekonzi matatu nekubata mahedhifoni (L).
4.Kuridza mimhanzi/kumbomira Kana munzeve uchiridza mimhanzi, rwiyo urwu runogona kumbomira nekubata earphone (R) kaviri nguva dzose, uye rwiyo runogona kuridzwa nekudzokororwa kushanda.
5.unokwanisa kudzvanya kaviri headset kuridza mimhanzi kana kupindura mafoni anouya, uchipa ruzivo rwakanyanya, kana paine kufona, tinya kaviri kune rumwe rutivi kuti udavire kufona, panguva yekufona, tinya kaviri parutivi kuti usungire. , nguva yemimhanzi tinya kaviri kune rumwe rutivi kutamba/kumbomira mimhanzi.
Zvakapfuura: Yechokwadi Wireless Semi-mu-Earbuds ine Kuchaja Kesi
Zvinotevera: Chokwadi Wireless Earbuds ane Hollow Metallic Kuchaja Case, Yakaderera Latency
Noise Kanzura Earbuds
Chokwadi Wireless Earbuds
Magnetic Running Wireless Earbuds Bluetooth ye...
Chokwadi Wireless Earbuds TWS Bluetooth Mahedhifoni ...
Chokwadi Wireless Earbuds Bluetooth Mahedhifoni Touc...
Bluetooth headset haingori neino shanda ...
© Copyright - 2010-2021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. Hot Products - Sitemap
Bluetooth Headset Ine Mic, Wireless Bluetooth Earphone, Bluetooth Mono Headset, Noise Kanzura Earbuds, Munzeve Earphone, Inobata Bluetooth 5.0 Earbuds,
Fiber Optic Enclosures & Patch Panel Factory muChina